यी पापी आमा जसले कुटेर नै मारिन आफ्नो ४ वर्षीय छोरीलाई – यस्तो छ चकित बनाउने कारण ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी पापी आमा जसले कुटेर नै मारिन आफ्नो ४ वर्षीय छोरीलाई – यस्तो छ चकित बनाउने कारण !
admin February 25, 2019 समाचार	0
फागुन १२ – भनिन्छ जन्मदिने भगवान हुन् । ९ महिनासम्म कोखमा राखेर अनेकौ पीडा सहेर जन्मदिने आमा नाम नै कहिलेकाही यमराज बनेर आउछ । यस्तै भयो ताप्लेजुङमा । मिक्वाखोला गाउँपालिका–४ साँवा घर भई फुङलङ बजारको रिजाल लाइनमा बस्दै आएकी ३२ वर्षीया पूजा चेम्जोङ लिम्बुको कुटाईबाट चार बर्षीय छोरीको मृत्यु भएको हो ।
शुक्रबार बिहान चेम्जोङले चार वर्षीया छोरीलाई कुटपिट गरी सख्त घाइते भएकी थिईन् । उनको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पूजाले छोरीलाई कुटपिट गरेर ढुंगामा पछारेकी थिइन्। लगत्तै उनको मुखबाट रगत निस्किएको थियो। घटनापछि पूजालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यी हुन आफ्नै श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने श्रीमान !
एमसीसी विवादले फुटको नजिक सत्तारुढ नेकपा, उपत्यका नछाड्न नेताहरूलाई निर्देशन
रूखमा अड्किएर भाग्यले बाँचेका नारायण, साथीहरूलाई बगाएकाे लाश पनि भेटिएन… (भिडियो हेर्नुस्)
कस्तो अचम्म! गंगा नदीमा तैरिदै आएको काठको बाकस भित्रकाे रहस्य यस्तो?
उपत्यकामा खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, सवारी साधन चल्ने कि नचल्ने?
मोरङमा बाहिरियो अर्को खसी काण्ड ? यस्तो अवस्थामा खसीसहित यी युवक समातिएपछि सबै चकित